अनलाइन कक्षालाई उपयुक्त हुने सिम्फोनी ब्राण्डका स्मार्टफोनहरु सूपथ मूल्यमा - Technology Khabar
» ताजा समाचार » अनलाइन कक्षालाई उपयुक्त हुने सिम्फोनी ब्राण्डका स्मार्टफोनहरु सूपथ मूल्यमा
अनलाइन कक्षालाई उपयुक्त हुने सिम्फोनी ब्राण्डका स्मार्टफोनहरु सूपथ मूल्यमा
Technology Khabar २९ असार २०७८, मंगलवार
बंगलादेशको चर्चित मोबाइल फोन ब्राण्ड सिम्फोनीले नेपाली बजारमा आफ्नो उपस्थिती बलियो पार्दै थप नयाँ मोडलहरु ल्याएको छ । कम्पनीले अनलाइन कक्षाहरुका लागि ध्यानमा राखेर सूपथ मूल्यमा उच्चस्तरका फोनहरु बजारमा ल्याएको हो ।
बंगलादेशमा नम्बर १ ब्राण्डको रुपमा रहेको सिम्फोनीका मोबाइल फोनहरु सिम्फोटेक प्रालिले नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको हो ।
सिम्फोनी ब्राण्डका छ स्मार्टफोन मोडलहरु कम्पनीले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको मा अब भने थप नयाँ मोडलहरु पनि आएका छन् । कम्पनीले सिम्फोनी जेड १८ (Z-18), जेड २८(Z-28), जेड ३२(Z-32), जेड ३० प्रो(Z-30 Pro) र जेड ४० (Z-40) स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ ।
यी फोनहरु बजेट मूल्यमा अनलाइन कक्षाको लागी उत्कृष्ट फिचर र आकर्षक डिजाइनसहित आएका छन् । जसमा फोटोग्राफीको लागि ड्यूल र ट्रिपल क्यामरा सेटअप रहेको छ । कम्पनीका सेल्स म्यानेजर र मार्केटिंग म्यानेजरद्धय राजेश चालिसे तथा गोबिन्द बस्यालले नेपाली बजारमा सिम्फोनी ब्राण्डका उत्कृष्ट मोबाइल फोनहरु ग्राहकहरुलाई सूपथ मूल्यमा उपलब्ध गराईने बताए ।
‘हामीले बंगलादेशको नम्बर १ ब्राण्डको मोबाइल फोन नेपाली बजारमा ल्याएका छौं । यो ब्राण्डका फोनहरुमा प्रिमियम फिचर राखिएको हुँदा ग्राहकहरुले रुचाएका छन् भने अहिलेको युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने किसिमको रहेको छ । हामीले यी फोनहरु अविश्वनिय मूल्यमा उपलब्ध गराउने छौं,’ सेल्स म्यानेजर र मार्केटिंग म्यानेजरद्धय चालिसे तथा बस्यालले भने।
यसका साथ ग्राहकले कम्पनीबाट मोबाइल सेटमा एक बर्षे वारेन्टी अनि ब्याट्री र चार्जरमा पनि एक बर्षे वारेन्टी पाउनेछन्।
हाल सार्वजनिक गरिएको सिम्फोनी जेड ४० (४/६४) र जेड ३० प्रो (४/६४) को बजार मूल्य रु. १६,४९९/–, सिम्फोनी जेड ३२(३/३२) र जेड २८(३/३२) को बजार मूल्य क्रमशः रु १३,४९९ र १२,९९९ तोकिएको छ । त्यसैगरि जेड१८ (२/३२) को बजार मूल्य रु. ११,७९९/- तोकिएको छ।
सिम्फोनी ब्राण्डका यी सबै फोनहरु नेपालभर उपलब्ध रहेका छन् ।